LXQt 1.1.0: Ny kinova stable manaraka hivoaka amin'ity Aprily ity | Avy amin'ny Linux
LXQt 1.1.0: Ny kinova stable manaraka hivoaka amin'ity volana aprily ity
Linux PostInstall | 09/04/2022 06:00 | GNU / Linux, About us
Indraindray dia samy GNU / Distros Linux, toy ny Applications, Tontolo Desktop (DE) y Window Managers (WMs) izay mampiditra azy, nohavaozina. Noho izany, mahafantatra izay rehetra azontsika atao, mba hitondra ny vaovao amin'ny fotoana mety indrindra. Ary androany, miankina amin'izany LXQt Desktop Environment, izay hamoaka tsy ho ela ny dikan-teny stable ho avy, eo ambanin'ny anarana sy ny laharana "LXQt 1.1.0".
Momba ity dikan-teny ho avy ity dia efa nisy Fampandrenesana mialoha ofisialy 2, navoaka tao amin'ny Bilaogy ofisialy avy amin'ny ekipan'ny fampandrosoana ny tontolo iainana Desktop lehibe toy izany. Ny daty voalohany, 14/02/2022, ary ny daty faharoa, 31/03/2022. Mandritra izany, miandry tapaky ny aprily 2022 aoka havoaka ity kinova vaovao vaovao.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirana tanteraka amin'ny lohahevitra anio momba ny Tontolon'ny Desktop, ary indrindra momba ny "LXQt", avelao ho an'ireo liana ireto rohy manaraka ireto ho an'ny sasany Lahatsoratra mifandraika. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
"LXDE dia navoaka tamin'ny ampahany tamin'ny 2013 avy amin'i Hong Jen Yee, mpahay siansa informatika Taiwaney rehefa vita ny PCManFM-Qt, ny maody voalohany amin'ny desktop QT. Rehefa nandeha ny fotoana, dia vita ny desktop LXQT feno, miaraka amin'ny tanjona ny hamorona tontolo Desktop vaovao, maoderina ary maivana ho an'ny fizarana miaraka amin'ny herin'aratra sy fanjifana loharanon-karena, nefa tsy miala tanteraka amin'ny fampandrosoana LXDE. LXQT dia natao indrindra amin'ny QT5 sy ireo singa hafa ao amin'ny KDE Frameworks 5". LXQT: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?
Efa nivoaka ny LXQt 1.0.0 vaovao ary ireo no vaovao
Tontolo iasan'ny Desktop hafa tsy tohanan'ny DEBIAN 10
1 LXQt 1.1.0 Desktop Environment: Dika stable vaovao tsy ho ela!
1.1 Inona no atao hoe LXQt?
1.2 Inona no vaovao momba ny LXQt 1.1.0
1.2.4 Qt6 teknolojia
1.2.6 Palettes Default maizina
1.2.7 Safidy ny menio
1.2.8 Fiovana hafa
Tontolo iainana Desktop LXQt 1.1.0: Dika stable vaovao tsy ho ela!
Inona no atao hoe LXQt?
Ao aminy tranokala ofisialy y Fizarana GitHub, fanehoan-kevitra momba ny LXQt Desktop Environment ny manaraka:
Izy io dia tontolo desktop Qt maivana. Tsy hanelingelina anao izany. Tsy hianjera na hampiadana ny rafitrao izany.
Izy io dia mifantoka amin'ny maha-databatra mahazatra misy endrika maoderina. LXQt dia efa tafiditra ao amin'ny ankamaroan'ny fizarana Linux sy BSD, ka azonao atao ny manandrana azy amin'ny rafitra mahazatra anao na amin'ny VM.
Izy io dia vokatry ny fampifangaroana eo amin'ny LXDE-Qt, tsiro Qt tany am-boalohany avy amin'ny LXDE, ary Razor-Qt, tetikasa iray mikendry ny hamolavola tontolo iainana Desktop miorina amin'ny Qt miaraka amin'ny tanjona mitovy amin'ny LXQt ankehitriny.
LXQt dia tokony ho lasa mpandimby an'i LXDE indray andro any, fa amin'ny 09/2016 dia mbola hitohy ny tontolo desktop roa amin'izao fotoana izao.
Izy io dia mifantoka amin'ny maha-databatra mahazatra amin'ny endrika maoderina. Anisan'izany ireto singa sy endri-javatra manaraka ireto: singa Modular, Mpitantana rakitra matanjaka, Manamboara endrika eny rehetra eny, Panel (s) misy plugins sy fika maro, ary Window Manager agnostika.
Inona no vaovao momba ny LXQt 1.1.0
teo anivon 'ny vaovao an'ity vaovao ity 1.1.0 version, ny ekipa mpamorona, dia manambara izao manaraka izao:
Safidy "File vao haingana" ao amin'ny menio "File".
Rehefa tsindrio ny "Asehoy ao amin'ny lahatahiry" ao amin'ny menio fampidinana navigateur dia efa voafantina ny rakitra alaina.
Fanamafisana nohatsaraina: Fanovana ny marika rehetra (tsy misy kaody sarotra intsony), sivana raikitra.
Fanamboarana bug lehibe: Samy ho an'ny terminal dropdown sy QTerminal.
Resadresaka momba ny toe-javatra mirindra kokoa, fanatsarana ho an'ny efijery ambany fanapahan-kevitra.
Ny anarana desktop dia aseho eo ambanin'ny "Move to Desktop..." ao amin'ny menio fikandrana.
Kisary bateria 3 vaovao (mampiseho ny isan-jaton'ny fiampangana).
Fampidirana ny endriky ny rindranasa ao amin'ny Qt6: kisary, endritsoratra, loko ary rakitra fifanakalozan-kevitra.
Mandeha ny fandefasana ny ampahany amin'ny LXQt mankany Qt6.
Ny palette default sasany dia ho voarindra mialoha.
Nohatsaraina ny fandrindrana lavanila.
Lahatahiry mahazatra ho an'ny wallpaper lohahevitra rehetra miaraka amin'ny sary vaovao sasany.
Palettes Default maizina
Palette miloko vaovao mifanandrify amin'ireo lohahevitra maizina misy, manamora ny fahazoana endrika tsy miovaova amin'ny ankapobeny. Ho an'ny lohahevitra maivana dia mety indrindra ny "Palette Default" an'i Qt. Ny lohahevitra "System" dia hampihatra ny loko avy amin'ny palette na aiza na aiza.
Safidy ny menio
Fametrahana sakafo roa vaovao no ampiana ao amin'ny firafitry ny sakafo fototra, Simple y voalamina tsara. Samy hivelatra amin'ny tontonana roa ihany izy roa.
Ny plugin tray dia azo ampiasaina hanehoana ireo kisary xembed lova mivantana ao amin'ny faritra fampahafantarana.
Ny bokotra reset dia miasa amin'ny farany amin'ny tontonana rehetra sy ny firafitry ny widget panel.
Bookmarks ho an'ny QTerminal.
GUI fanatsarana ny lxqt-config-input sy lxqt-config-session.
Ny mety hisian'ny faritra fampahafantarana maro.
Fandikan-teny bebe kokoa, fanadiovana kaody, ary fanamboarana bug.
Raha mila fanazavana fanampiny sy antsipiriany miaraka amin'ny santionany pikantsary dia azonao atao ny mijery azy ireo ao amin'ny Fampandrenesana mialoha ofisialy 2, voalaza teo am-piandohana: 14 / 02 / 2022 y 31 / 03 / 2022.
Raha fintinina, araka ny hitantsika, "LXQt 1.1.0" Izy io dia fanavaozana vaovao tsara sy ara-potoana tena stylish sy miasa «Desktop Environment». Antenaina fa afaka andro vitsivitsy dia hivoaka ity dikan-teny vaovao ity ary maro no hametraka azy, andramo hampiasa sy hijerena azy vaovao sy fiovana nampanantenaina. Izaho manokana dia efa nampiasa imbetsaka LXQt, ary ho solon’ny mpino ahy XFCEToa safidy tsara amiko izany, na dia mbola tsy nila nosoloiko aza. Satria ny XFCE dia mahafeno ny filàko rehetra sy ny filàko asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » LXQt 1.1.0: Ny kinova stable manaraka hivoaka amin'ity volana aprily ity
Suso dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao, ity desktop ity dia tsy mendrika izany, mandany mihoatra ny xfce, lxde raha mandany zavatra kely kokoa, ka tsy misy azo soratana ao an-trano, ny xfce dia azo amboarina kokoa ary ambonin'ny rehetra stable, miaraka amin'ny lxqt dia nanana olana hafa aho fa tsy tamin'ny xfce. .
Mamaly an'i Suso
Arahaba Susie. Misaotra anao tamin'ny fanehoan-kevitrao sy ny fandraisanao anjara mifototra amin'ny traikefanao manokana momba ny LXQt. Tiako kokoa ny XFCE noho ny LXQt.
Octavian dia hoy izy:
Salama, izaho manokana dia nametraka LXQT hijery ny fandehany fa tsy nisy na inona na inona tamin'ny farany niverina tany amin'ny XFCE satria heveriko fa tsara kokoa izany, mankasitraka
Niverina indray ny fananganana mivantana amin'ny Gentoo ary hatao isan-kerinandro
SELKS, distro iray hisorohana sy hamantarana ny fidiran'ny tambajotra